वैदेशिक रोजगारीमा ठगिने नेपालीको पीडा – Lokpati.com
नेपाली काँग्रेस अमेरिका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड केपी शर्मा ओली नेकपा पक्राउ नेपाल प्रहरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मृत्यु राशिफल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री सरकार अपराध चितवन
By सुजिता हमाल On १३ फाल्गुन २०७६, मंगलवार २०:२२
कमला गुरुङ/काठमाडौं। विदेश जाने पैसा कमाउने अनि बाबा आमाको ऋण तिर्ने आँखाभरि सपना मनभरि खुशीको उमंग बोकेर रामेछापका नवराज तामाङ काठमाडौं आए। म्यानपावरले माघ १४ गते तपाईको भिसा लाग्छ भनेकाले घरबाट छोरालाई बिदाई गर्न बाबा पनि आएका थिए। बिहानै नवराजलाई विदेश पठाउने व्यक्तिले फोन गरेर भन्यो, ‘तपाईको भिसा क्यान्सिल भयो। १५ दिनपछि फेरि भिसा लाग्छ, कुर्नुहोला’ उसले फोन राख्यो।
समय बित्दै गयो १५ दिन पनि बित्यो। तर म्यानपावरबाटै फोन आउँदै आएन। अब के गर्ने ? उनले एकछिन सोचे, अस्ति फोन गर्ने म्यानपावरको साथीको मोबाइल पनि अफ छ। उनले चाहिँ बल्ल थाहा पाए, आफू फसेको कुरा । उता एक महिना बितिसकेको थियो, साहुबाट लिएको ऋणको ब्याज माग्न घरमा साहु आउन थालिसकेका थिए। आमाले फोन गरेर छोरा ब्याज बढेको बढ्यै छ, साहुहरु घरमा ऋण माग्न आएको आयै छन्, के गर्ने होला ? आमाले यति भनेर फोन राखिन्।
ऊ निशब्द भयो, आफू फसेको कुरा साथीहरुलाई सुनायो । ऊसलाई दिनहरु उजाड लाग्न थाल्यो, भाग्यले ठगेको अभागी मान्छे ठानेर ऊ एकान्तमा बसेर रुन्थ्यो। उसलाई आफन्त साथीभाईले सम्झाए – रोएर हुँदैन, फसेको पैसा फिर्ता ल्याउनुपर्छ। उनीहरुले सरकारका विभिन्न निकायमा पुगेर कानूनी उपचार खोज्न उनलाई सुझाए। तर, उनले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्।
घरमा सबै जना खुशी थिए, छोरा विदेश गएर ऋण तिर्छ भनेर। नवराज भन्छन्, ‘नेपालमा आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसारको काम नपाएपछि बैदेशिक रोजगारीमा जाने सोचाइ आयो र पासपोर्ट बनाए। घर, परिवार, आफन्त सबैबाट टाढा परदेशको ठाउँ कसरी काम गर्ने न त्यहाँको भाषा बुझिन्छ। तर विदेसिनु नेपालीको रहर होइन, बाध्यता हो।
तामाङले विदेश जानका लागि बैँङ्कमा घर धितो राखी १० लाख रुपिँया ऋण झिकेका थिए। विदेश गएर पैसा कमाउने अनि आमा बाबालाई खुशी राख्ने सपना बोेकेर उनी विदेश जान लागेका थिए। तर, उनको त्यो सपना भने अधुरै रह्यो। आँखाभरि आँशु पार्दै उनी भन्छन्, ‘सायद खुशी हुनु मेरो भाग्यमा लेखेकै रहेनछ। विदेश जानुभन्दा १ दिन अगाडि मात्रै उनले थाहा पाए कि उनी ठगिएका रहेछन् । विदेश पठाइदिन्छु भनेर उनीबाट १० लाख पैसा लिएको ब्यक्तिको मोबाइल अफ नै रह्यो।
हजारौँ नेपालीहरु बैदेशिक रोजगारीमा जादा ठगिँदाको पीडा उनले मात्रै होइन, नेपाली युवाहरुले भोग्दै आएका छन्। केही दिनपछि आफ्नो फसेको पैसा फिर्ता पाउने आशामा भौँतारिदै हिडे। विदेश पठाइदिन्छु भनेर उनको मात्रै होइन, अरु १० जनाको पनि पैसा फसेको थियो। उनीहरु सबैजना मिलेर छलफल गरे। बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठगिएका नेपालीहरुको उद्धार गर्दै आएका विभिन्न सङ्घसंस्थामा उनीहरुले बुझे।
तर केही उपाय नलागेपछि पैसा लिएर भागेको ब्यक्तिलाई समातेर पुलिस चौकी लिएर गए। अहिले पनि ठगी गर्ने ब्यक्ति भने जेलमै छ। तर उता दिनदिनै साहुबाट लिएको ऋणको ब्याज बढिरहेको छ। सजिलै पैसा आउला भन्ने आशा पनि उनीहरुले मारिसकेका छन्।
बैदेशिक रोगारीमा जाँदा भाषा र सीप सिकेर जानुपर्छ। आफू जाने म्यानपावर दर्ता भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा आवश्यक जानकारी लिएर मात्रै बैदेशिक रोजगारीमा जाँदा सुरक्षित भइन्छ। विदेश जाने व्यक्तिले म्यानपावर कम्पनि कस्तो हो, त्यो वैधानिक छ कि छैन ? आफू जाने देशको हावापानी, संस्कृति, सरकारी कानून र आफूले गर्ने काम कस्तो छ ? यसबारे राम्रोसँग बुझेको हुनुपर्छ। तर, हामीकहाँ हचुवामा विदेश जाने परिपाटीले लाखौं नेपाली ठगिने गरेका छन्।
नेपालमा आफूले सोचेको र आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनुसारको काम नपाएपछि पछिल्लो समय बैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली युवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। देशलाई आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति युवाहरु विदेश पलायन हुँदा देशले ठूलो मात्रामा क्षति ब्यहोर्नु परेको छ। नेपाल सरकारले बैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई नेपालमै रोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी सीप सिकाइ र स्वदेशमै रोजगारको व्यवस्था गरे मात्र यस्ता ठगी पूर्ण निर्मुल गर्न सकिन्छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी सम्बन्धी कानून त बनाएको छ। तर, दलालहरुले सरकारले बनाएको कानूनलाई छलेर पैसा असुल्छन्। सरकारले कागजमा प्रमाण हेर्छ। तर, दलालले सकभर कागजी प्रमाण नपुर्‍याइकन ठग्न खोज्छ। यसबारे सरकारले नयाँ नीति र कानूनको व्यवस्था नगर्ने हो भने वर्षेनि लाखौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिई नै रहनेछन्।